Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Abakhenkethi bafumana i-Phuket Nightlife iphela ngokukhawuleza kwi-9
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Safety • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ubusuku bobusuku ePhuket
Abasemagunyeni baseThailand basePhuket bavale indawo ezinobungozi kwaye bayimisa imisebenzi enokuthi ihambise i-COVID-19 ngePhuket yasebusuku ivaliwe nge-9.
Oku kumiswa kuchaphazela ii-pubs, imivalo, kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa ezifuna amashishini ukuba avale nge-9 ngokuhlwa.
Okubandakanyiweyo kwigunya lokuvala ngentsimbi ye-9 kukutya-kwiivenkile zokutyela nakwiivenkile ezinkulu.
Iivenkile zeKaraoke, amabala emidlalo yamanqindi, amabala okulwa iqhude, kunye nokhuphiswano lweentaka kufuneka zilandele ixesha lokuvala.
Irhuluneli yasePhuket uNarong Woonsew watyikitya umyalelo wokuvala ezi ndawo kunye nokumisa imisebenzi enokusasaza i-COVID-19.
Wabandakanya amaziko okuthenga asekhaya anokuhlala evulekile kude kube nge-9 ngokuhlwa ngelixa kwangaxeshanye enciphisa inani labathengi kunye nokumisa imisebenzi yokwazisa kunye neenkonzo zoomatshini babo bezemidlalo kunye neepaki zokuzonwabisa.
Ukutya kwiivenkile zokutyela kufuneka kuyeke ngo-9 ebusuku. Amagosa orhulumente wasekhaya kunye nabasebenzi bemibutho yaseburhulumenteni akufuneki bashiye iPhuket ngaphandle kokuba banezizathu ezingxamisekileyo kwaye bafumana imvume kubaphathi babo.
Umyalelo uqala namhlanje, nge-20 kaJulayi, kwaye uqhuba u-Agasti 2. Eli nyathelo likarhulumente liphendula kukonyuka kwamatyala e-COVID-19 kwiindawo ezahlukeneyo zasePhuket.
Bacinga ntoni abantu
Uninzi lwabantu baseThailand (malunga neepesenti ezingama-61) bacinga ukuba imeko yangoku nge-COVID-19 ayizukuzisombulula kude kube kwiminyaka embalwa ukusukela ngoku, ngokophando olwenziwe nguSuan Dusit Poll.